KU SAABSAN SAMEWE
Yu Huan Makiinado Co., Ltd. waa horreeyay ee Ningbo Shuangyu (Samewe) Machine Computerized Flat Tolidda saaraha Co., Ltd., oo la aasaasay 1990,
Waa shirkad wax soo saarka mishiino keenidda R dhamaystiran & D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga. Tan iyo aasaaskii 1992, waxaynu ku iskaashi la warshadaha hoggaamineed gudaha oo u hantidaan qalabka wax soo saarka casri ah oo awood cilmi xoog
In hore ee 2006, shirkadda guurtay saldhig saarka si Ningbo Shiinaha ee meel weyn horumarinta go'aanka isha oo bilaabay in ay soo saaraan Computerized Flat Tolidda Machines 2007. Shirkadda daboolaa aag of 28000 ㎡, meesha dhismaha waa 25000 ㎡ . Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira in ka badan 500 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan shaqaalaha farsamada xisaabay in ka badan 40%.
In 28 sano ee la soo dhaafay , Shuang Yu ayaa had iyo jeer loo hoggaansamo falsafadda ganacsiga dadka-u janjeedha: innovating iyo horumarinta suuqa, u hoggaansanaayeen tayada xariif, iyo guusha macaamiisha u-adeegiddan Ilaah. Waxaan mar walba ku hogaamiyay iyo ku dhiirri-abuurnimo, iyo maal si buuxda tababarka shaqaalaha iyo cilmi tiknoolaji iyo horumarinta, iyo kuwa helay shatiyada badan technology qaranka.
Haddaba, Shuang Yu ayaa xafiisyada satellite ee India, Turkey, Vietnam iyo qaybo kale oo aduunka ah, waxyaabaha our ayaa la dhoofiyo dibadda iyo si balaadhan looga aqoonsan yahay oo amaanay by suuqa maxalliga ah.
"Hayso socda, ha iloobin oggoshihiin bilaabayso ee". In horumarka mustaqbalka, Shuang Yu wadi doontaa in ay u hoggaansamaan wadada of "technology High, tayo sare leh iyo sumcadda sare", iyadoo la adeegsanayo farsamada xoog leh, qalab heer sare ah iyo maamulka kaamil ah, aanu ku siin doonaa waxyaabaha wanaagsan iyo waayo-aragnimada adeega macaamiisha our.
Innovation marnaba istaago, mustaqbalka waa xad lahayn. Shuang Yu ayaa isha ku sii siqayaan gacanta-in-gacanta kula waayo, ammaanta is!